DEGDEG: Dagaal ka dhex qarxay ciidamada Somaliland iyo Jabhadda Wabar. – Kismaayo24 News Agency
by admin 16th November 2019 0212
Warar aanu helayno ayaa sheegaya in Ciidamada Somaliland iyo kuwa Jabhada Wabar uu dagaal ku dhexmaray deegaanka Degmo-Laqas ee galbeedka magaalada Boorama.
Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii Ciidamada Somaliland ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Jabhada Wabar oo ku sugnaa deegaankaasi, kuwaasi oo ay kala kulmeen iska caabin xoog leh.
Wararka aanu helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in is-rasaaseyn muddo socotay kadib ay qaar kamid ah ciidamada Jabhada Wabar ay u baxsadeen dhinaca xuduudka Itoobiya, halka saddex kamid ah ciidankaasina ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada Somaliland.
Ciidamada Somaliland ayaa gacanta ku soo dhigay saddex dhalinyaro oo ay ku dhaawaceen iska hor-imaadkaasi, kadib markii ay ka firxadeen ciidamadii kale ee iska caabinta kuwada jireen, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen dad deegaanka ah.
Somaliland ayaa u muuqata mid quus ka taagan wada-hadal ay la furto Jabhada Wabar, kadib markii uu hogaamiyaha Jabhdaasi, Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar uu sheegay inuusan marnaba waxba ka sugeyn hogaamiyaha ugu sareeya Somaliland ee Muuse Biixi, maadama uu qarka u saaran yahay in uu kala dareeriyo beelihii Hargeysa.
Musuq maasuq lagula kacay Qaxooti ay Soomaali kujiraan iyo baariitaan lagu wado.
Musharax Xasan Gureey oo si aan horay lo arag logu soo dhaweyay Cabudwaaq.
War deg deg:- Khilaafkii R.W iyo Madaxweynaha oo meel Xasaasi ah maraya
admin 6th June 2014 28th August 2015